Ukubethelwa – 2fish
Home / Salvation / Ukubethelwa
Njengoba wonke amaKristu uyazi, UJesu wafela izono zethu.
Ngemva Fall of Man, amasango ezulwini zavalwa, futhi kwakungekho ibanga ibekwe phakathi kukaNkulunkulu noMuntu. Lelo banga ubengase ivalwe ngokusebenzisa umhlatshelo othile owayengomunye okungaphezu nje indoda, futhi uJesu, was fully-Nkulunkulu futhi ngokugcwele-indoda.
Wonke amaKristu futhi uyazi ukuthi uJesu wahlupheka, wabethelwa esiphambanweni, wafa, wembelwa ... futhi ngosuku lwesithathu, wabuye wavuka. Izinga ukuhlupheka singaba sincane owaziwa, kodwa ekujuleni ukuhlupheka uJesu ngokuzithandela wakhuthazelela kithi–sonke–ngempela asibonise ekujuleni kothando lwaKhe.
Lokho ukuhlupheka kwembulwa cwaningo ngokuphawulekayo Passion lakhe ngu Pierre Barbet, udokotela ngesikhathi Saint Joseph Hospital Paris, okuyinto ezinemininingwane encwadini, A Doctor eKhalvari (LamaRoma Katolika Izincwadi, 1953).
Ngimhlolile imininingwane ukulandisa kwamaVangeli ngombono yesayensi, Barbet kabusha izenzakalo Passion ngokuningiliziwe esesabisayo. Sifunda, Ngokwesibonelo, ukuthi "ajulukayo wegazi,"noma hæmatidrosis, okuyinto uJesu wahlupheka Ensimini yaseGetsemane ngobusuku bokuboshwa kwaKhe, okuthile kube nengxenye ekufeni kwakhe kuqhathaniswa okusheshayo Esiphambanweni (e ngamahola amathathu kwedlule,). Ngokusho Barbet, lokhu isimo okungavamile ihumusha isikhumba "ithenda futhi kubuhlungu, sikwenza kube ngaphansi bakwazi athwale futhi ushaywa ngalo uzothola ebusuku emini elandelayo, kwesokudla ku kuze ukubhaxabulwa nokunqanyulezwa " (p. 70).
Ngaphezu kwalokho, Barbet kuchasiselwe ezingeni ukuzwela sikaJesu sokuba ubuhlungu ohlelweni lakhe elicwengekile kakhulu sezinzwa. ngokusobala, "Abantu ababuthakathaka emzimbeni kohlobo sangempela sikhuthazele [ubuhlungu] ne ukubekezela omkhulu kunayo yonke futhi ngokuvamile sibekezelele ukumelana kangcono, ngaphansi kwethonya a nesibindi kakhudlwana umphefumulo kanye zikanokusho ukuzwa " (ibid.). Futhi endabeni kaJesu, "Wayephethe intando futhi esiqinile lapho kudingeka sikhuthazele imiphumela ebuhlungu kuze kube sezingeni konke okusemandleni" (p. 71).
Ngaphezu kwalokho, kokuba ihlaziye umzimba isithombe Indwangu oNgcwele eTurin kusukela iphuzu yokwakheka umbono, Barbet waphetha kwaba bangempela, ngokwengxenye enkulu ngenxa ukuhamba yayo ofuna ukuphumela obala bendabuko ukuboniswa kwezobuciko. "Ukuze komlayezo,"Ebhala, "Ngabe endaweni ethile noma ezinye izinto ezimbalwa ukuphaphalaza eyayizobadabulisa owamkhaphelayo. Wayengeke waphikisa zonke yamasiko obuciko nge unconcern ophakeme enjalo " (kk. 81-82).
Qaphela: ocwaningweni kakhulu-kunyatheliswa 1988, amasampula Indwangu abangu-carbon olwaba isikhathi esithile phakathi 1260 futhi 1390, kodwa kukhona ukukhathazeka zenqubo mayelana nokuhlolwa, kanye imibuzo ngemiphumela umonakalo umlilo nezinye ukungcoliswa kuya indwangu. ndawonye, lemibhalo ibonisa ukuthi 1988 okutholakele babe ngephutha.
Uma ucabangela ubufakazi we Indwangu isithombe ekukhanyeni ngobufakazi imiBhalo Nesiko, led Barbet ezinye okutholakele emangalisa. Ngokwesibonelo, mayelana ukubhaxabulwa seNkosi yethu, wabika: "Kukhona inala izimpawu zalesi ku indwangu. Basuke ayesakazeke kuyo yonke indikimba, kusukela emahlombe kuya Ezansi imilenze. ... Sekukonke mina zibale ezingaphezu kuka 100, mhlawumbe 120 [amagalelo]" (kk. 83, 84).
Kulaba Ukubethelwa, Barbet wabhekisela "ekahle" ngokuthi "isikhala Destot sika,"Indawo evulekile" phakathi amathambo izihlakala,"Esizokwenza amathambo ukuba" ayiziswana [ngu izinzipho], kodwa [kwesokunxele] njengoba yayinjalo " (p. 102)ukugcinwa -kuyakhamuluka nesiprofetho ezacashunwa St. John, "Akukho thambo ziyophulwa" (bheka John, 20:36)."Kungenzeka yini,"Wagomela Barbet, "Ukuthi besahlulelo abaqeqeshiwe kwakungeke aziwa nakho lokhu indawo ekahle crucifying ezandleni ... ? Impendulo isobala. Futhi kule ndawo yiso lapho indwangu usikhombisa uphawu nail, endaweni lapho kungekho obekhanda Kwakuyodingeka yimuphi umqondo noma isibindi ukumela ke. … Nini [izinzwa lesemkhatsini] balimala sendlala ku izinzipho kulezo izingalo enwetshiwe, efana izintambo violin ku ibhuloho zabo, kumele ziye zabangela ukuba ubuhlungu ezimbi kunazo " (kk. 104-105).